युवाको काँधमा सीबीएम – CBM
युवाको काँधमा सीबीएम
कसैको पढाइ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट । कसैको नर्सिङ । कोहीको व्यवस्थापन । जागिर सबैको राम्रो थियो । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढेको तलब नराम्रो हुने कुरै भएन । चाहेको भए बैंकको नेतृत्व गर्न सक्थे । युरोप, अमेरिका जस्ता विकशित देशमा गएर पैसा कमाउन पनि सक्थे तर नेपाली माटोको मायाले उनीहरूको मन कतै गएन ।
कोभिड- १९ का कारण काठमाडौं लकडाउन थियो । घरमै बस्नुको विकल्प थिएन । फुर्सदको समय । अब के गर्ने ? के गर्न सकिन्छ ? नयाँ आइडिया के हुन सक्छ ?
भावना पाण्डे, सुमन न्यौपाने, राहुल राठी र अजय साहलगायतको टिमलाई लकडाउनले जोड्यो । उनीहरूले निष्कर्ष निकाले- शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने ।
तर, कसरी ? फेरि उनीहरूले छलफललाई निरन्तरता दिए । अन्तत: लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको डिल्लीबजारको कलेज अफ विजनेस म्यानेजमेन्ट (सीबीएम)मा जोडिन पुगे । अहिले उक्त कलेज यिनै युवाको काँधमा आएको छ । नवीनतम सोच । युवा जोसका साथ सीबीएमको मुहार फेरिन पुगेको छ अहिले । Read full article